एजेन्सी । छिमेकी देश भारतमा आजबाट देशभरका स्मारक तथा ऐतिहासिक स्थल खुल्ने भएका छन् । यद्धपि मुगल वास्तुकलाको उत्कृष्ट नमूना ताजमहल भने अहिल्यै नै नखुल्ने भएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण ताजमहल र आगराक...
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पानीको मुहानभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीयलाई खोलामा नजान आग्रह गरेको छ । आयोजनाको केन्द्रीय कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै आइतबारदेखि मेलम्ची खोलाको पानी पथान्तरण गरी स...
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २९३ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १५ हजार ७ सय ८४ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्...
काठमाडौं । गीतकार डा. डीआर उपाध्यायले गीत लेखेरै यतीबेला गिनिज अफ वर्ल्ड रेकर्डमा आफ्नो नाम लेखाएका छन् । यस अघि विभिन्न १४ वटा विश्व रेकर्ड कायम गरेका डा. उपाध्यायले यसपटक ‘मायाको सागरमा’ गीति एल्वम...
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षदवय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको छलफल सकिएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफल पछि पुष्पकमल दाहाल प्...
काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारीका कारण यस वर्षको कक्षा ११ को परीक्षा नहुने भएको छ । पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले विद्यालयले गरेको आन्तरिक परीक्षाका आधारमा यस वर्ष विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र द...
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा भित्र चरम गुटबन्दी मौलाउँदै गइरहेको छ । आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय म...
बागलुङको क्वारेन्टाइनमा रहेका एक युवकको मृत्यु
काठमाडौं । बागलुङको क्वारेन्टाइनमा रहेका एक युवकको मृत्यु भएको छ । ढोरपाटन नगरपालिका- ४ को क्वारेन्टाइनमा रहेका निसीखोला गाउँपालिका-२ देविस्थान घर भएका २९ वर्षका युवककाे गए राती निधन भएको हो । लकडाउन...
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको विरुद्ध महाअभियोग लगाउने झुटो प्रचार भइरहेको बताएका छन । प्रधानमन्त्री एवम नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा...
काठमाडौं । पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह महमुद कुरैशीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । कुरैशी स्वयंले ट्विटरमार्फत आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको जानकारी दिएका बीबीसीले जनाएकाे छ । उनले लेखेका छन्, “दिउ...
चीनद्वारा हङकङको सुरक्षा प्रमुखमा ‘हार्डलाइनर’ चेङ याङसेङ नियुक्त
हङकङ । चीनले हङकङका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागु गरेको चार दिनपछि नयाँ सुरक्षा प्रमुख पनि नियुक्त गरेको छ । चीनले नयाँ सुरक्षा प्रमुखमा 'हार्डलाइनर' चेङ याङसेङलाई नियुक्त गरेको बीबीसीले जनाएको छ ...
क्याटालोनिया । करिब दुई लाख जनसंख्या भएको स्पेनको क्‍याटालोनियामा लकडाउन जारी गरिएको छ । उक्त क्षेत्रमा आवतजावतमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । क्षेत्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार तीन हजार ...
कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शवबाट कोरोना सर्दैन : स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शवबाट कोरोना नसर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शवबाट कोरो...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज ११ अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका छन् । यी उडानमार्फत विभिन्न मुलुकमा अलपत्र १ हजार ८२ यात्रु नेपाल फर्किएको विमानस्थलले जनाएको छ । साउदीबाट पाँच, मलेसियाबाट ३ र दमा...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने र आफूलाई दुबै पदबाट हटाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन । शनिबार साँझ मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूसँग छफफल गर्दै आफ्नो पोजिसन क्ल...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केहि दिन यता उच्च स्तरिय भेटवार्ता जारी गरेका छन । शनिबार केहि समय अघि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटेर फर्किए लगत्तै मन्त्री र राज...
काठमाडौं। पछिल्लो २४ घण्टामा थप २३२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । मन्त्रालयले शनिबार आयोजना गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले संक्रमितको संख्या १५ हजार ४९१ पुगेको जनाए । शनिबा...
काठमाडौं । ललितपुरको खोकनामा किसान र प्रहरीबीच झडप भएको छ । झडपमा परी ४ जना प्रहरी घाइते भएका छन् । प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि ७ राउन्ड अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको छ । खनजोत र रोपाइँ...
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले पार्टी फुट्न नदिने बताएका छन । शनिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेता शर्माले रुपान्तरण सहितको एकता आजको आवश्यकता भएको उल्लेख ...
जेनेभा । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले कोरोना भाइरस संकटको प्रारम्भिक चरणको बारेमा जानकारी अपडेट गरेको छ। डब्ल्यूएओले भन्याे कि वुहानमा निमोनियाको मामिला सम्बन्धी चेतावनी चीनले नभई चीनमा डब्ल...